Vaovao - Inona avy ireo tombony sy fatiantoka amin'ny lamba polyester
I. Tombony amin'ny lamba polyester:
1. Ny lamba polyester dia manana tanjaka lehibe. Ny tanjaky ny fibre staple dia 2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, ary ny tanjaky ny fibres mahery dia 5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Noho ny fananany hygroscopic ambany dia mitovy ny tanjany mando sy ny tanjany maina. Ny tanjaky ny fiantraikany dia avo 4 heny noho ny nylon ary 20 heny noho ny an'ny viscose fibre.
2. Super elastika ny lamba polyester. Ny modulus elastika dia 22 ~ 141cN / dtex, 2 ~ 3 avo heny noho ny nylon, izay tsy mitovy amin'ny lamba hafa.
3. Ny fanoana hafanana polyester dia manana fanoherana hafanana tsara. Azo lazaina fa ny dacron no lamba fibra simika tsy mahazaka hafanana sy mora volavolaina. Raha atao zipo feno hafaliana izy io dia afaka mitazona tsara ny patotra tsy misy fanosorana be loatra.
II. Ny fatiantoka ny lamba polyester:
1. mahantra fitrohana hamandoana, fifangaroan'ny hamandoana vita amin'ny lamba polyester, noho izany ny fitafiana polyester dia hanana fahatsapana mafana, miaraka amin'ny elektrostatika tsotra, aretina amin'ny vovoka, ny fiantraikan'ny hatsaran-tarehy sy ny fampiononana, fa aorian'ny fanadiovana dia tena tsotra sy mankaleo, ary ny tondra mando saika tsy mitete, tsy misy deformation, manana functionable akanjo tena tsara.
2. Fananana fandokoana ratsy. Satria tsy misy génie fandokoana voafaritra amin'ny rojom-bolo molekiola polyester ary kely ny polarity, somary sarotra ny mandoko ary mora ny mandoko.
3, mora pilling, polyester lamba dia iray amin'ireo entana fibre synthetic, ary isaky ny lamba fibre synthetic manana ny pilling scene, polyester lamba entana ampiasaina mandritra ny fotoana iray dia hanana ny pilling scene.
Hangzhou Dro Textile dia mpanamboatra lamba polyester matihanina. Tongasoa eto amin'ny consultation